Cat Phones na-ebupụta smartphones ọhụrụ ultra-eguzogide, Cat S31 na Cat S41, na IFA 2017 | Androidsis
José Alfocea | | IFA, Noticias
Ihe ngosi IFA 2017 a na-eme na Berlin ụbọchị ndị a na-enye ọtụtụ onwe ya, ma n'akụkụ nke ụdị ndị ama ama dịka Samsung ma ọ bụ LG, yana n'akụkụ ndị ọzọ na-adịchaghị n'ozuzu mana nke ahụ ka o sina dị, nwere ndị na-ege ntị na-eguzosi ike n'ihe ma nwee mkpebi siri ike.
Nke a bụ ihe banyere ekwentị Phones, a ụlọ ọrụ pụrụ iche na imewe nke ngwaọrụ siri ike ma na-eguzogide ọgwụ, nke a kwadebere maka ndị ọrụ kachasị nwee obi ike, nke gosipụtara ọhụrụ ekwentị ọhụrụ, Cat S31 na Cat S41.
1 Ekwentị ndị kacha sie ike
2 Nakwa ater Caterpillar T20, mbadamba maka ndị njem ahụ
Ekwentị ndị kacha sie ike
Dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwuru, ndị ọrụ nke Cat ngwaọrụ sitere na ngalaba dịka nchekwa, ọrụ ugbo, ihe owuwu, akpaaka, ma ọ bụ na ha bụ ndị ọrụ nwere mmasị maka ịhapụ adrenaline n'ihe egwu na ihe omume dị egwu. N'ọnọdụ ọ bụla, ndị a bụ ndị ọrụ chọrọ smartphones siri ike, na-eguzogide ọgwụ, kwụụrụ onwe ya ma sie ike, naanị ihe ụlọ ọrụ na-enye ọhụrụ Cat S31 na Cat S41.
Ọhụrụ Cat S31 bụ mmelite nke onye bu ya ụzọ, Car S30, a na-echekwa ya karịsịa maka ndị ọrụ "ndị chọrọ ekwentị siri ike na ha nwere ike ịtụkwasị obi".
Ihe e ji mara ya gụnyere a 4,7 anụ ọhịa ahụ nwere mkpebi 720p ma rụọ ọrụ nke ọma maka iji ya eme ihe n’èzí, ọbụlagodi mkpịsị aka mmiri, yana mkpuchi Corning Gorilla Glass 3. 4.000 mAh batrị, 2 GB nke RAM, 16 GB nke nchekwa - imebawanye site na kaadị micro SD, Android 7.0 Nougat dị ka sistemụ arụmọrụ na a mgbochi mmiri nke ahụ na-enye ohere imikpu ruo mita 1,2 miri emi maka nkeji 35 (asambodo IP68).
Ọzọkwa, nke ọhụrụ Cat S41 E gosipụtara ya dịka mmelite nke Cat S40 gara aga na, dị ka nke gara aga, ọ bụ ama ama na-apụta maka ya oke nguzogide, ike na nnwere onwe.
Ọhụrụ Cat S41 smartphone atụmatụ a 5 nke anụ ọhịa ahụ Full HD ihuenyo na Corning ozodimgba iko 3 nchedo ma kachasị maka iji pụta n’èzí, ọbụlagodi mgbe aka gị dị mmiri.
N'ime ya ụlọ a 5000 mAh batrị nke, dị ka ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya si kwuo, "na-enye ụbọchị iri anọ na anọ nke oge ma ọ bụ ruo awa 44 nke oge ikwu okwu na 38G", na-eme ka ọ bụrụ ngwaọrụ e mepụtara maka ndị na-etinye oge dị ukwuu pụọ n'ụlọ na ịpụpụta. Ma ọ bụ na, na mgbakwunye, o nwere ọrụ nkekọrịta batrị, nke ga - enyere gị aka ịnye ngwaọrụ ndị ọzọ site na ama ruo ọkwa nke ịdebanyere onwe gị, n'oge nke ịgba ụgwọ ga-akwụsị.
Na Cat S41 nwekwara a asatọ isi Mediatek processor na 2,3 GHz esonyere Nchekwa 3 GB Ram, 32 GB nke nchekwa na ị nwere ike ịgbasa ruo teras abụọ site na kaadị micro SD, ọ nwere Asambodo IP68 maka uzuzu na nguzo mmiri.
Dịkwa ka sistemụ arụmọrụ, ọ na-abịa na Android Nougat dị ka ọkọlọtọ.
Nakwa ater Caterpillar T20, mbadamba maka ndị njem ahụ
Yana Cat S31 ọhụrụ na Cat S41, ụlọ ọrụ ahụ Cat ekwentị mkpanaaka na emeghewokwa mpempe akwụkwọ ọhụrụ ahụ Katapila T20, nke bu uzo izizi emere n’ime ngwa a.
Dị ka ndị gara aga, ọ bụ mbadamba karịsịa siri ike ma na-eguzogide ọgwụ, ndị e mepụtara maka ndị "na-arụ ọrụ na ọnọdụ na ebe ngwaọrụ ndị dị oké mkpa dị mkpa."
Otu n'ime atụmatụ ndị pụrụ iche nke mbadamba pụrụ iche pụtara ìhè:
Usoro njikwa Windows 10
Njikọ LTE, Wi-Fi, USB 3.0, Obere HDMI, vidiyo si, Bluetooth 4.1
Asambodo IP67 ájá na mmiri na-eguzogide
iji daa site na 1,8 mita elu
ka ịma jijiji
Nnu ihe ntanye nnu na oke ikuku ikuku, ya mere enwere ike iji ya rụọ ọrụ ma ọ bụ ọnọdụ ihu igwe ọ bụla.
Batrị 7500 mAh (obughi iwepu)
8 ″ ihuenyo na Gorilla Glass nchedo
8350GHZ Quad Core Intel® Atọm Z1,44 Nhazi
Ntọala nchekwa 64 GB
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ndị a na ngwaahịa ngwaahịa ekwentị Cat, gaa na ebe nrụọrụ weebụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » IFA » Ekwentị Cat na-ewepụta smartphones ọhụrụ ya na-eguzogide ọgwụ, Cat S31 na Cat S41, na IFA 2017
Ahụrụ m ika a n'anya. Ego ole?